Wafdi uu Hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Eritrea ayaa soo gaadhay magaalada Muqdisho. – Xeernews24
Wafdi uu Hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Eritrea ayaa soo gaadhay magaalada Muqdisho.
Wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda Eritrea oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Cusmaan Saalax ayaa goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wafdigan heerka sare ee ka socda dowladda Eritrea ayaa la sheegay inay socdaalkooda horudhac u yihiin wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo dhowaan booqasho ku imaan doona magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya.
Booqashadii Madaxweyne Farmaajo ku tagay Asmara iyo hadalkii uu ka jeediyay ayaa waxaa ka cadhootay dowladda Jabuuti oo si kulul uga jawaabtay baaqii Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in cunaqabateynta laga qaado Eritrea, waxaana xilligan mugdi galay xidhiidhkii cusbaa e Soomaaliya iyo Eritrea.
Siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan taagan isgoys xaalada is bedelada badan leh ee ka jira Gobolka Geeska Afrika, iyadoo u muuqato inay si tartiib tartiib u raaceyso xulafada Itoobiya iyo Eritrea oo u janjeedha Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ay hoggaaminayaan ee Khaliijka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/07/42-5.jpg 464 744 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-13 10:17:482018-08-13 10:17:48Wafdi uu Hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Eritrea ayaa soo gaadhay magaalada Muqdisho.
Laba arrin midkood ayaa keentay xabad joojinta si iskeed ah ugu dhawaaqday ... Turkiga oo wajahaya xaalad adag kadib isbeddel lama filaan ah oo ku yimid L...